Activities | Chanmyay Yeiktha
Read more about ချမ်းမြေ့ဆရာတော်မွေးနေ့ပုံရိပ်များ
၆၈ ​ကြိမ်​မြောက်​ဓ​မ္မ​ခ​ရီး (၂၀၁၆ ​ဂျွန်​မှ ​ဩ​ဂုတ် ၁၇)
၂၀၁၆ ​ဂျွန်၂၀​ရက် ​မှ ​ဂျူ​လိုင် ၂​ရက် ​အ​ထိ
၂၀၁၆ ​ဂျူ​လိုင် ၂​ရက် ​မှ ၁၁​ရက် ​အ​ထိ
Read more about ၆၈ ​ကြိမ်​မြောက်​ဓ​မ္မ​ခ​ရီး (၂၀၁၆ ​ဂျွန်​မှ ​ဩ​ဂုတ် ၁၇)
Invitation to the Buddha Day (Puja Celebration)
Buddhists all over the world celebrate on the second month of lunar calendar, on this Vesak the Buddha Day, in commemoration of (1) the Birth of the Gotama Buddha, (2) his attainment of the Full Enlightenment, his becoming endowed with Sabbannutta Nana, his becoming endowed with Sabbannutta Nana, his becomingaSupremely Self-Enlightened Buddha, and (3) his Passing Away, Mahaparinibbana.
Read more about Invitation to the Buddha Day (Puja Celebration)
အီလီနွိုက်ပြည်နယ် ၊ စပရင်းဖီးမြို့၊ ချမ်းမြေ့သတိပဌာနဝိဟာရ၌ ၂၀၁၆ခုနှစ် မေလ၂၁ မှ ၂၃ရက်နေ့ထိအောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းဘုရားရှင်အား အာမိသ ဓမ္မနှစ်ဝသော ပူဇော်မှုတို့ဖြင့် ပူဇော်သော ဗုဒ္ဓပူဇနိယ၏
ပွဲတော်ကို ပြုလုပ်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါ၍ ကုသို်လ်လိုလား သူုတော်စင်များပါ၀င်ဆင်နွှဲနိုင်စေရန် စိတ်ရည်သန့်လျက် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
Read more about ကဆုန်လပြည့်နေ့ ဗုဒ္ဓ္ဓပူဇနိယပွဲတော်ဖိတ်ကြားလွှာ
Sayardaw’s 68th Dhamma Tour 2016 June, July, August
Jun 20 - July 2
To Canada, Vancouver
Alaska State. Anchorage, USA
Read more about Sayardaw’s 68th Dhamma Tour 2016 June, July, August
2016 April Sayardaw’s 67th Dhamma Tour
ချမ်းမြေ.ဆရာတော်ဘုရား၏ ၆၇ ကြိမ်မြောက် ဓမ္မခရီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလ
ဧပြီ ၂၈ - မေ ၈
Read more about 2016 April Sayardaw’s 67th Dhamma Tour
2016 March Sayardaw’s 66th Dhamma Tour
ချမ်းမြေ.ဆရာတော်ဘုရား၏ ၆၆ ကြိမ်မြောက် ဓမ္မခရီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ
မတ်လ ၁ - ၁၀
Read more about 2016 March Sayardaw’s 66th Dhamma Tour
​ချမ်း​မြေ့​ရိပ်​သာ ( ​စင်္ကာ​ပူ )
​ချမ်း​မြေ့​ရိပ်​သာ ( ​စင်္ကာ​ပူ ) ​၏ ​တ​ရား​တော်​မြတ်​အား​ဓ​မ္မ​ပူ​ဇာ​ကု​သိုလ် ​လှူ​တော်​အ​ဖြစ် ​စီ​စဉ်​ကျင်း​ပ​မည့် ​ကျေး​ဇူး​တော်​ရှင် ​ချမ်း​မြေ့​ရိပ်​သာ ​ဆ​ရာ​တော်​ဘု​ရား​ကြီး ​ဟော​ဖော်​ညွှန်​ပြ​မည့် ​ည​နေ​ချမ်း​ဓ​မ္မ​သ​ဘင်​ကြီး​ကို ​အောက်​ဖော်​ပြ​ပါ ​အ​စီ​စဉ်​အ​တိုင်း ​ဆင်​ယင်​ကျင်း​ပ​မည်​ဖြစ်​ပါ​၍ ​ဓ​မ္မ​မိတ်​ဆွေ​သူ​တော်​စင်​အ​ပေါင်း​တို့​အား
Read more about ​ချမ်း​မြေ့​ရိပ်​သာ ( ​စင်္ကာ​ပူ )
တတိယအကြိမ် တပည့်ယောဂီများက ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား ပူဇော်ပွဲ
​တ​တိ​ယ​အ​ကြိမ် ​တ​ပည့်​ယော​ဂီ​များ​က ​ချမ်း​မြေ့​ဆ​ရာ​တော်​ဘု​ရား​ကြီး​အား​ပူ​ဇော်​ပွဲ​ကို ​ရန်​ကုန်​ချမ်း​မြေ့​ရိပ်​သာ​ကျောင်း​တွင် ၂၀၁၆ ​ခု​နှစ် ​ဇန်​န​ဝါ​ရီ​လ ၂၃၊ ၂၄၊၂၅​ရက်​များ​တွင် ​ကျင်း​ပ​ပြု​လုပ်​မည်​ဖြစ်​ပါ​သည်။
​အ​မေ​ရိ​ကန်​နိင်​ငံ​တွင်​ရှိ​သော ​တ​ပည့့်​ယော​ဂီ​များ​မှ ​စု​ပေါင်း​၍ ​အ​လှူ​ငွေ​များ​ကို ​ပေး​ပို့​လှူ​ဒါန်း​ကြ​မည်​ဖြစ်​ပါ​သည်။
Read more about တတိယအကြိမ် တပည့်ယောဂီများက ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား ပူဇော်ပွဲ
ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ (စကာင်္ပူ) ၏ တရားတော်မြတ်အား ဓမ္မပူဇာကုသိုလ် လှူတော်အဖြစ် စီစဉ်ကျင်းပမည့် ကျေးဇူးတော်ရှင် ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောဖော်ညွှန်ပြမည့် ညနေချမ်းဓမ္မသဘင်ကြီးကို အောက်ဖော်ပြပါ အစီစဉ်အတိုင်း ဆင်ယင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါ၍ ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်အပေါင်းတို့အား တရားနာယူကြွရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာဖြင့် မေတ္တာရှေ့ထား ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
Read more about ​ချမ်း​မြေ့​သ​တိ​ပ​ဠာန်​ဝိ​ပ​ဿ​နာ​ပြန့်​ပွား​ရေး
2016 Sayardaw’s Dhamma Tour
Sae Ywa Village Retreat, Near Mandalay
Contact Person - U Suseina Tel: +9595105225
Read more about 2016 Sayardaw’s Dhamma Tour